ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်၊ ဆံပင်တွေမှာ ကိုဗစ်ပိုး ကပ်ပါလာနိုင်သလား ဆိုတဲ့ အဖြေ – Myanmar
ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်၊ ဆံပင်တွေမှာ ကိုဗစ်ပိုး ကပ်ပါလာနိုင်သလား ဆိုတဲ့ အဖြေ
September 27, 2020 admin Health, Knowledge 0
ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်ရင် အင်္ကျီ၊ ဖိနပ်၊ ဆံပင်၊ သတင်းစာတွေမှာ ကိုဗစ်ပိုး ကပ်ပါလာနိုင်သလား?
တချို့ဈေးတွေမှာ ဆိုင်တွေကို ခွာထားတယ်။ လူတွေကို ခပ်ဝေးဝေးက တန်းစီခိုင်းတယ်။ ပစ္စည်းပေးရင်တောင် ဝါးလုံးနဲ့။ အဲ့လိုတကယ်လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။ ရန်ကုန်က ၇ လမ်းထိပ်တို့၊ ၁၈ လမ်းထိပ်တို့မှာတော့ လူတွေဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် ပူးကပ်နေမြဲပါပဲ။ တိုးကြိတ်ဈေးဝယ်နေကြတာပါပဲ။ ဒါမျိုးဆို အိမ်ရောက်တာနဲ့ အဝတ်ကိုတန်းပြီးလျှော်မယ့်အထဲ ထည့်တာကောင်းပါတယ်။
လေ့လာချက်တစ်ချို့အရ ချောင်းဆိုး၊ နှာချေပြီးရင် ဗိုင်းရပ်စ်ပါတဲ့အမှုန် အများစုဟာလေထဲမှာမနေပဲ မြေကြီးပေါ်ကျသွားပါတယ်။ သေးတဲ့အမှုန်ဟာ လေထဲမှာနာရီဝက်အထိရှိနေနိုင်တာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Aerodynamics ရူပဗေဒ သဘောတရားကို သင်ဖူးရင် ဒီအမှုန်တွေဟာ အင်္ကျီ၊ ဆံပင်ပေါ်ကပ်လို့မလွယ်တာကို နားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ပြတင်းပေါက်ကနေထိုးနေချိန်မှာ နေရောင်ထဲမှာ အမှုန်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လက်နဲ့လိုက်ဖမ်းကြည့်ပါ။ လွင့်ပြေးသွားပါတယ်။ လေထဲမှာဝဲနေတဲ့ မှို့စကလေးကို လိုက်ဖမ်းကြည့်ပါ။ ပြေးသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ရေထဲမှာရှိတဲ့အနည်ကို လက်နဲ့ထိဖို့ကြိုးစားရင် မလွယ်တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကြားခံရေထုကြောင့် လိုက်လေပြေးလေဖြစ်တာပါ။ လေထဲမှာရှိတဲ့လေထုဟာ ကျနော်တို့ကိုအမှုန်တွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူမထိမိအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကျနော်တို့က ငြိမ်နေရင်လည်း ဖုန်တက်မြန်တယ်။ အရမ်းမြန်ရင်လည်း ဖုန်တက်မြန်ပါတယ်။ (ပန်ကာဒလက်ကိုကြည့်ပါ။)
ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ဟာ Social Distancing လို့ခေါ်တဲ့ ခပ်ခွာခွာဆက်ဆံခြင်းမူကို လက်ကိုင်ထားရင် လေထဲမှာရှိနေတဲ့အမှုန်ကို ကြောက်စရာမလိုပါ။ ဒါပေမယ့် လူတွေကြားထဲကျပ်ညပ်ဈေးဝယ်ရရင် ဆံပင်နဲ့အင်္ကျီပေါ် ပိုးပါတဲ့အမှုန်တွေ ဒါရိုက်ကျနိုင်တာမို့ အင်္ကျီကို လျှော်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုတာပါ။
ဆံပင်ပေါ်အနောက်ကနေ တယောက်ယောက်ချောင်းဆိုးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ခေါင်းအုံးနဲ့ ဆိုဖာပေါ် ပေါ်လှဲမချပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်ခေါင်းအုံးပါ။ တယောက်ယောက်က ဆံပင်ပေါ် တိုက်ရိုက်ချောင်းဆိုးခဲ့ရင်တောင်မှ အများစုကလေထဲလွှင့်သွားပါမယ်။ တကယ်ကူးစေတာက လက်ဆီကပါ။
Washionton University School of Medicine က Dr. Andrew Janowski ရဲ့အပြောအရ ပိုးပမာဏ X ကို ဆံပင်ပေါ် ရောက်စေခဲ့ရင် သင့်လက်နဲ့ပြန်ထိမိမှာက X ထက်အများကြီးနည်းတဲ့ပမာဏပါ။ အဲ့ဒီကနေ သင့်နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်ဆီပြန်ရောက်မှာက အလွန့်အလွန်နည်းတဲ့ပမဏပါ။ ဒီရက်ထဲ သမီးရည်းစားချိန်းတွေ့ရင် ဆံပင်နမ်းတာတော့ သည်းခံကြပေါ့။
နောက်တစ်ချက်က ပိုးဟာကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ပိုင်းကို လေနဲ့ဆန်မတက်ပဲ ကိုယ်ခန္ဓာ အောက်ပိုင်းဘက်ကို ပိုရောက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဆံပင်ကို သိပ်စိတ်ပူစရာမရှိပါ။ ကိုဗစ်ကာလမှာ ဆံပင်တိုတို ထားကြပေါ့။
ဒါ့ကြောင့်ဈေးကပြန်လာရင် အဓိကကလက်ကို အသေအချာဆေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဝတ်ကိုခါပစ်တာဟာ လေထဲကိုပိုးတွေလွင့်ပြီး သင်ပြန်ရှုမိတတ်ပါတယ်။ Hair dryer နဲ့မှုတ်တာလည်း အဲ့ဒီအပူလောက်နဲ့ ပိုးမသေပါ။ အမှုန်တွေကို သင်ရှုမိတတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ သိထားစရာတစ်ခုက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရဲ့သက်တမ်းတစ်ဝက်သေနှုန်း Half Life က မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လေထဲမှာပိုမြန်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အဝတ်ရဲ့အသား Fabric က ရေဓာတ်ကိုစုပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူ့အပေါ်ကိုကျထားတဲ့ ပိုးကိုသေတာမြန်စေပါတယ်။
လူဆီကပိုးကမြေကြီးပေါ်ကျတယ်။ အဲ့ဒီပိုးကို ဖိနပ်က သယ်ဆောင်လာပါတယ်။ တရုတ်မှာ ICU ထဲစီးခဲ့တဲ့ ဖိနပ်တစ်ဝက်မှာ ပိုးသယ်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ဈေးကပြန်လာရင်ဖိနပ်ကို လက်နဲ့မကိုင်ပါနဲ့။ အိမ်ထဲမစီးမိပါစေနဲ့။ ကလေးတွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
တိရိစ္ဆာန်နဲ. အစားအစာ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အလန်းစား ဓါတ်ပုံများ
ရန်ကုန်မြို.တွင်း သွားလာရန်အတွက် ကားများ Online Register ပြုလုပ်ရတော့မည်ဖြစ်ပြီး Online Register ပြုလုပ်နည်း